AirTags dia azo tahirizina ao amin'ny Apple izao, toy ny iPhone 12 volomparasy | Vaovao IPhone
Apple dia efa nanokatra ny Apple Store an-tserasera ary manomboka izao dia afaka manao famandrihana ho an'ny AirTags, tag mpikaroka ary kojakoja vaovao ianao. Ary koa ny loko volomparasy vaovao ho an'ny mini iPhone 12 sy 12.
Apple dia mandefa sokajy accessories vaovao iray hafa, ary manao izany amin'ny fitaovana iray izay mampanantena fa hamidy toy ny Ros keels: AirTag. Ity kapila kely ity izay mifandray amin'ny iPhone dia mamela anao hahafantatra ny toerana misy an'ilay zavatra ampiarahinao aminy (lakile, kitapo kitapo, kitapo, biby fiompy ...) dia misy vidiny € 35 raha vidintsika malalaka io, na € 119119 4 raha mividy azy amin'ny fonosana XNUMX isika. Izy io dia miasa amin'ny batterie cell button izay azo soloina ary maharitra mandritra ny herintaona. Amin'ity horonan-tsary ity izahay dia manazava izay rehetra tokony ho fantatrao momba ity fitaovana vaovao ity.
Ho fanampin'izay, ireo AirTags ireo dia tonga miaraka amina kojakoja vitsivitsy izay afaka mametraka azy ireo amin'ny zavatra samihafa. Apple dia efa nanolotra rojo vy lehibe sy kofehy hafa, fa maro hafa koa no miseho amin'ny Amazon sy ny fivarotana hafa, na dia ny vozon'akanjo ho an'ny alikanao aza. Ho fanampin'ny AirTag dia efa azontsika atao ny mividy ny iPhone 12 sy 12 mini amin'ny loko vaovao, volomparasy, izay nanana ny fotoany nisongadina tamin'ny hetsika farany tamin'ny faha-20, izay ahitantsika koa ny iPad Pro vaovao sy ny iMac M1. Ireto vokatra farany ireto dia mbola tsy mifanaraka amin'ny famandrihana azy ireo, tsy maintsy miandry isika hatramin'ny 30. Ireo izay mitahiry ny AirTags sy ny iPhone 12 vaovao volomparasy anio dia handray azy ny zoma 30 aprily ho avy izao, na dia antenaina tsy ho ela aza ny daty fandefasana. lava
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Ny AirTags dia azo tahirizina ao amin'ny Apple izao, toy ilay iPhone 12 volomparasy
Apple dia mametra hatramin'ny 16 AirTags izay afaka ampifandraisina amin'ny ID Apple tsirairay